Ekufuneni ubuhle abesifazane aye ayisebenzisa kaningi ngezindlela ezihlukahlukene, ngokuvamile eyinkimbinkimbi kangaka futhi iyingozi, ukuthi umphumela ongemuhle ayenzi ezizayo. Nokho, namuhla likhetha esikhulayo amakhambi emvelo ukuthi akukho umonakalo empilweni ukubukeka ukusiza ziphathelene nezinkinga. Okuvame kakhulu zalabo kuyinto ubumba abamnyama, yiziphi izici imilingo eyaziwa ngazo zonke izikhathi. Zama ukuthola ukuthi iyini imaski esiphawulekayo black ubumba ebusweni impendulo mayelana izakhiwo ezinhle okuyinto ukudlulisa ngejubane lokukhanya.
Kuyini udaka omnyama?
Black ubumba - uhlobo densest ka ukungaguquguquki ngubumpunga powder black noma kumnyama, okunamafutha uma uyithinta. Mayelana isimangaliso izakhiwo zobumba kukhona edume. Buso kwezindlu kusekelwe kuyo oyenzile kusukela kudala. Futhi namhlanje, ngesisekelo ubumba black ekhiqizwa zonke izinhlobo imikhiqizo ukunakekelwa kwesikhumba. Kuvele umbandela ezibalulekile lapho uthenga yinani, ubumba imaski abamnyama ubuso ngempela kukho isabelomali, ngoba lo mkhiqizo yemvelo ngempela ashibhe, futhi ungakwazi ukukhokhela ngamunye ubulili fair.
Umlando nesenzakalo ubumba
Kukholakala ukuthi buso ngobumba, baqala ukusebenzisa indlovukazi yasendulo yaseGibithe, njengoba ayazi yezindlela eziphumelela kakhulu zokwenza abantu nokugcina intsha nobuhle.
Nokho, buso ubumba abangu kabanzi izakhamizi ugu. Esizukulwaneni ngesizukulwane, badlula ulwazi ku ukuphi Clays. Abantu bomphakathi basebenzisa ubumba, hhayi kuphela abantu kodwa futhi ngoba ukugeza izinwele, ukwelapha amanxeba. Sithola ezitolo basuke kucishe ukubunjwa ubumba, kodwa kwalokho izitshalo zokwelapha.
I mnyama umbala nebumba, ephumelela kakhudlwana kungenxa isikhumba, ngakho makudle ubumba abamnyama.
Ukwakheka black ubumba
It has a nethonya elihle isikhumba ngenxa yokuqukethwe yayo kwezakhi - calcium, Silica, insimbi, Sesithombe, okuyinto enze umsebenzi inkanuko kwegazi futhi sithuthukise ukugeleza kwegazi, zisusa ubuthi futhi akhiphe amanyela. Clay uba nombala omnyama ngenxa carbon okuqukethwe kulo, yensimbi.
Phakathi nocwaningo kwatholakala ukuthi ubumba imaski abamnyama ubuso kusiza balahle induna, imibimbi futhi sithuthukise isikhumba ithoni. Kufanele bonke isikhumba izinhlobo.
It has izakhiwo ngokuyisimangaliso, okuyinto okunzima ukuba ngiphikisane naye. Ngekusetjentiswa ukuqhubeka isikhumba kuthuthukisa hhayi kuphela ukubonakala, kodwa futhi uphulukisa e izingqimba ezijulile. Ngo izimonyo eziningi ulifake black ubumba buso ebusweni ngoba induna nayo iyathinteka kulokhu.
Lapho usebenzisa buso ubumba eliphathisa kwenzeka umphumela - aqede ngokusebenzisa amangqamuzana esikhumba somuntu ufile, kanjalo kungase kuqashelwe emva inqubo, umsungulo futhi olubushelelezi ebusweni.
Kokulinganisa we nezindlala sebaceous.
Uma une isikhumba oily, imaskhi ubumba abamnyama ngokuba ubuso kusiza ukuqeda bukhanye.
mkhuba Yande - ikhule ezimbotsheni evulekile, lapho umuntu ethola i-ukubukeka ezingemnandi, bese isikhumba akubukeki bushelelezi. Ngekusetjentiswa ukuqhubeka ubumba ingafinyelela ukuvaleka ikhule ezimbotsheni futhi bushelelezi kwamanzi yesikhumba.
Kunzima phikisana yokuthi abesifazane obubusa arsenal likhona buso ubuso ubumba abamnyama, ekhaya ukuthi bengayi kanzima ngakho ukubheka abaneminyaka engaphansi yabo.
Isikhathi esingcono kakhulu ukusebenzisa buso - sokulala, ebusuku isikhumba ukuphumula futhi kuyoba fresh futhi kamnandi.
Ngaphambi kokuba uqale inqubo, udinga ukuba ahlanze ubuso bakho - ukugeza off ukwakheka, ugeze ngensipho Sula ubuso bakhe. Ukuze ukwazi ukufaka isicelo ngokukhululekile ubumba eduze nentaba ebusweni, ukususa izinwele ngendlela engcono Ponytail.
Hlanganisa ubumba Kudingeka ingilazi noma iphosilini isitsha ugovuze ngesipuni kusukela izinto ezifanayo. Qiniseka ukuthi amahora hhayi ngokweqile imaskhi.
Breeding lokushisa lamanzi kumele ubumba 25-30 degrees, ivuse kuze ukuvumelana ukhilimu omuncu. Sebenzisa ibhulashi engcono, ukugwema ezizungeze amehlo nomlomo. Ngemuva kwemizuzu engu-15, ugeze off imaskhi futhi sisebenzise ukhilimu.
Ukuze imaski iye yasiza sifinyelele nomphumela ofiselekayo, ngesikhathi esifanayo ngaphandle umonakalo empilweni, kubalulekile ukulandela iziqondiso ezithile.
Black ubumba asifanele isikhumba ngenetha semithambo kanye Rosacea.
Ukuze sifinyelele ukungaguquguquki kanye alube, ubumba kufanele buhlanjululwe uketshezi ekamelweni lokushisa.
Ukuze ugweme ukusabela kabi komzimba okuphekiwe ubumba ingxube kufanele agqoke esihlakaleni, uma isikhumba ishiywa ehlanzekile zazingekho emizweni ezingemnandi, ubumba ekufanele.
Sebenzisa imaskhi ebusweni kumele kube emigceni massage ngaphandle kokuthinta endaweni iso.
The Mask ubumba abamnyama ngokuba ubuso ukuba esikhumbeni akukho kuka imizuzu engu-15, ukuze ugweme umuzwa yobunzima.
Hashaza off buso amanzi plain.
Ukuze uthuthukise umphumela okunengqondo ukusebenzisa buso ubumba ku kushunqe isikhumba lapho yabuya, futhi ezimbotsheni zivuliwe, isibonelo, ngemuva ukugeza umzimba ngamanzi izikhathi ezimbalwa ngesonto.
Ngemuva kwesicelo, ungakwazi moisturize isikhumba ukhilimu yayo.
Ekupheleni 10-12 izinqubo kudingeka anikeze isikhumba sakho siphumule emasontweni ambalwa azayo.
Uma unezinkinga isikhumba ikhambi elifanele kakhulu kuyinto engokwemvelo ubumba abamnyama ngokuba ubuso. Imithetho sokusebenzisa imaski kuyafaneleka ukucabangela uma ungakwazi ukufeza umphumela oyifunayo ngaphandle nobunzima kanye nezindleko okusezingeni eliphezulu.
Abantu abaningi bakholelwa ukuthi uma umkhiqizo yemvelo yezimonyo, le contraindications ukusebenzisa kwayo akukwazi, kodwa akunjalo. Ukuthi inqubo yokufaka isicelo ubumba akazange badalele wena, kumelwe wazi ukuthi imaskhi ubumba abamnyama ngokuba ubuso ingasetshenziswa hhayi abantu isifo senhliziyo, umfutho wegazi ophakeme semithambo kanye neziguli ukuba izimila kwanoma yiluphi uhlobo. Futhi, ungayisebenzisi buso izifo wokugaya ukudla, umgudu wokuphefumula, igazi, lokushisa ephakeme, okuthile engqondweni.
Uma kukhona izinkinga ne isikhumba, lesikahle kungaba imaski ubumba abamnyama ngokuba ubuso, okuyinto ungakhetha iresiphi kulesi sihloko. Ukuze uthuthukise umphumela buso ubumba engeza izithako ezahlukene.
imaski Classic - ukuncibilikisa ubumba ngamanzi isicelo esikhumbeni isikhathi esibekiwe.
Ukuqeda induna, udinga esikhundleni yamanzi ngokulandelana umhluzi.
Skin amafutha ubumba ukuxubana ngesipuni amafutha ukhilimu omuncu kanye eluhlaza amaqanda isikhuphasha.
Ukuze kuzuzwe umphumela mhlophe, uhlanganise ubumba ubisi, engeza isipuni ukhilimu omuncu kanye parsley oqoshiwe.
Zokuhlanzwa ukuxubana 1 isipuni kalamula tincture calendulakuva nobumba.
Ukuze nokunciphisa ukuxubanisa isipuni ngobumba ikhukhamba puree kusuka uginindela.
Face buso eyenziwe omnyama ubumba eluhlaza kuhle kakhulu kokukhipha namaqhubu. Kuyadingeka ukuba chaza 1 isipuni ubumba 1 isipuni amanzi, wafaka ebusweni, ake yome ke ezimanzisa iminwe futhi uhlikihla ubuso emigqeni massage, kuyilapho Ubumba usongwa. Hashaza nobumba futhi umphumela ekuphineni, ukulungiselela nenye 2 wezipuni oatmeal kanye ne-100 ml amanzi, ingabe uyaxebuka.
Ukuze balahle induna ubuye kuyindlela efakazelwe. Kuyadingeka ukuba chaza 1 tsp ubumba 2 wezipuni ukumnika ngokulandelana, zisebenza imizuzu 10-15 futhi hashaza ngamanzi abandayo. Ungakwazi ukwengeza uchungechunge ezincane futhi uthele iqanda omhlophe ke kungenzeka ukufeza umphumela kokuqina futhi ikhule ezimbotsheni emincane. Ngemva kokugeza, ukusula sengqondo ubuso.
Ukuze evamile futhi inhlanganisela isikhumba ubumba kufanele buhlanjululwe chamomile akhiphe isicelo imizuzu 10 ebusweni nasentanyeni, kugeze futhi Sula ubuso chamomile.
Ukuze evamile ukuba isikhumba esomile kudingeka uhlanganise 1 isipuni ubumba nge dollop ka ukhilimu omuncu neqanda isikhuphasha, shiya esikhumbeni imizuzu 10-15, ugeze off imaskhi futhi sisebenzise ukhilimu.
Black ubumba ngenkuthalo ekwelapheni cellulite ukwenza ezisonga, thatha udaka zokugeza, ubumba - ikhambi jikelele ubuhle ukuthi awusoze ulahlekelwe kwayo.
Isisekelo Nekomedogenny: Ukubuyekeza, ukubuyekezwa
"Inja" - tattoo ukuze kwakwakhiwa kakhulu
Steroid - Iyini? Uyini umphumela zabo emzimbeni?
Dream Ukuhunyushwa: Tsunami
Ikhaya lwemithombo whiskey
Cream "Boro Plus" induna - ikhambi ephelele inkinga isikhumba